ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့
Posted by Sine Sant on Mar 26, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary | 28 comments
စ ။ ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့. . .
မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်း ဧရာဝတီ မြစ်အနောက်ဘက်ကမ်း
ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ မြစ်ကြီးနား ဆိုတဲ့မြို့ မှာ လုလုရဲ့ ဘဝကိုစခဲ့ တယ် ။
မှတ်မိပါသေးတယ် . .
မနက်စောစော အဖွား ဈေးသွားရင် အဖွားရဲ့ လက်ကို ဆွဲပြီး
ဈေးကိုမရမက လိုက်သွားတယ် ။(မလိုက်ရရင်ခြေကန် ပြီးငိုတာပေါ့)ဈေးရောက်ရင် အဖွားနဲ့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ စား ရတယ်လေ။
အဖွားက ပဲပြားနဲ့ ပဲပင်ပေါက် ချက်စားမယ်ဆို ရင်
ဈေးသည် ကို “ယောင်းမ ရယ် ကျမ မြေးကပဲပင်ပေါက်မကြိုက်ဘူး တဲ့ ပဲပြား ပဲ ထည့်ပေးပါ “။ဆိုတော့ လုလုမျက်နှာပြုံးဖြီးဖြီးပေါ့ ။
နောက် အိမ်ပြန်တော့မယ်ဆိုရင် မုန့် စိမ်းပေါင်းလည်းယူပြန်ချင်တယ် ၊ ကောက်ညှင်းပေါင်းလည်းစားချင်သေးတယ်၊ ရွှေထမင်း ကိုလည်း အလွတ်မပေးချင်ပြန်ဘူး နောက်ဆုံးတော့ ရသလောက် ကို ပူဆာ ခဲ့ပြီး အိမ်ရောက်တော့ မောင်ငယ်လေး နဲ့ သူကများတယ် ငါ့ကျ နဲတယ်နဲ့ ဗိုလ်ကျသံတွေဆူညံပွက်လောရိုက်ပြီးမှ မနက် မနက် တိုင်းရဲ့ မရိုးနိုင်တဲ့ သံစဉ် တွေကို ထုတ်လွှင့်ခဲ့ကြတာ ကိုတွေးမိတော့ လွမ်းရပြန်တယ် ။
၂။ ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့ . . .
မြစ်ဆိပ်ကမ်းဘက်သွားပြီးတနေကုန် တနေခန်း နှုတ်ခမ်းတွေပြာ အသားတွေ မဲတဲ့အထိ ရေထဲ ဒိုင်ပင် ထိုးချ ပြီးရေကူး ရတာလောက်ပျော် တာမရှိ ခဲ့ဘူး ။ အဖွား နဲ့ အဒေါ်တွေ ဘယ်လောက်တားတား လူကြီးတွေလစ် ပြီဆိုတာနဲ့ မောင်နှမ နှစ်ယောက် ခေါင်းချင်းဆိုင်အကြံထုတ်ပြီ တစ်ယောက်က မလိုက်ချင် ဘူး ဆိုလည်း မရ ရအောင် ဆွဲခေါ် ဝါသနာ ကတူကြပြန်တော့ ဘယ်သူ့ ကိုမှ ကြာကြာ ခေါ်နေဖို့ မလိုပြန်ဘူးး။ နေပူကျဲကျဲ အောက်မှာ မြစ်ရေစိမ် ခဲ့ ကြတော့ အိမ်ပြန် ရောက်တဲ့အချိန်ဆို အသားကမဲ မျက်လုံးကနီ နှုတ်ခမ်းကပြာ တကိုယ်လုံး ကာလာ ရောင်စုံနဲ့ နောက်ဖေး ပေါက်ကနေ ကုတ်ချောင်းချောင်းနဲ့ 
ခိုးဝင် ခဲ့ ကြတာ မိလို့ ကတော့ အဖွားကဆူ အဒေါ်က ရိုက် “အမလေးးးသွားချင်ဦးဟ နောက်တခါ သွား ဦး ” မျက်ရည်လည်ရွှဲ နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ် ကို ဆုံးမ မိပြန်ရော ။ ဒါလည်းခဏ ပါ ရိုက်ခံရတဲ့အနာ သက်သာ လာပြီဆို ပိုးကထလာပြီ အမှတ်မရှိသွားဦးနောက်တခါ ပေါ့်။ မြစ်ရေသာ သွားသွားကူးနေတာ အဲ့တုန်းက ခြေဗလာနဲ့ ရေထဲဆင်းတာဆိုတော့ ပုလင်းကွဲ ရှတာ နှစ်ခါ အနားမကျက်ခင် တပတ်လောက်မှာ လမ်းကမလျှောက်နိုင် မနေတတ်မထိုင်တတ်နဲ့အိမ်ဘေး လမ်းဖက်ကနေ ဘောကွင်းတွေကိုင်ပြီးကလေး တစု ဖြတ်သွားတာမြင်ရင် ရေကူးချင်တာတပိုင်းသေ တော့မယ် ။ အနာသက်သာပြီဆို တည်းက ရေထဲ ဆင်းပြီဆို ကြက်ပေါင် ဖိနပ် မချွတ်တမ်းကို စီးထား တော့တယ် ။ အဲ့ဒါ ခုချိန်ထိ အကျင့်ပါပြီ ရေချိုးခန်းထဲ ချိုးရင်တောင် ဖိနပ် က ချွတ်ဖို့ မေ့နေ တတ်တယ် (ဤကား စကားချပ် ) ။ အဲ့တုန်းက မှတ်မှတ်ရရ မြစ်ကြီးနား၊ မြို့ ဂုဏ်ရည် ရုပ်ရှင် ရုံမှာ “နှလုံးလှလူမိုက် “ရုပ်ရှင်ကားလာပြတယ် ။(မင်းမော်ကွန်း နဲ့ ခိုင်သင်းကြည် )အဒေါ်တွေ ခေါ်သွားလို့ အဲ့ ရုပ်ရှင် သွားကြည့်မိကတည်းက တစ်လလောက် မြစ်ဆိပ်ရေသွားမချိုး ဘူး ။ဇာတ်ကားထဲကလို မိကျောင်းကြီး ထွက်ကိုက်မှာစိုးလို့ လေ (ဇာတ်ကားမှာ မင်းမော်ကွန်းက မိကျောင်းတွေ ကိုလိုက်ဖမ်း လိုက်သတ် တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေပါတာကိုး :-):-)
၃ ။ ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့ . . .
လုလု မှာ အိမ်နားကသူငယ်ချင်းတွေဆိုရင် ယောက်ျားလေးတွေ များတယ် ကျောင်းမှာဆို မိန်းကလေး တွေနဲ့ ပေါင်း ရတယ် ။ အိမ်ကအစ်ကို အစ်မ တွေနဲ့ ဆို အသက်က အရမ်းကွာတယ် လေးနှစ်လောက် ငယ်တဲ့မောင်လေးကိုသူငယ် ချင်းလို ပေါင်းရတော့ မောင်လေးရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက လုလု ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားတာပေါ့ ။ တခါတလေ အစ်ကို ကမြစ်ဆိပ်မှာငါးမျှားသွားဖို့ ပြင်ဆင်နေတာ တွေ့ ရင် သူ့ အနားက မခွာတော့ဘူး လိုက်ချင်လို့ မူယာမာယာတွေ များနေတတ်တယ် ငါးသာမျှားချင်တာ တီကောင် တွေဆို အရမ်းရွံ တယ် မကိုင်ရဲဘူး တွန့် တွန့် နဲ့ အသည်းယားလွန်းလို့ ကြောက်တာလည်း ကြက်တီးတောင်ထတယ် ။ ငါးမျှားလိုက်ချင်တော့ ရေပုံး ကိုင်ပေးမယ် ၊ငါးစာ ခွက်ကိုင်ပေးမယ် ဘာဘာညာညာ အရဲစွန့် ပြီးပြောရတာပေါ့ ။ “အေး လိုက်ခဲ့ “ဆို ကိုယ့်လောက်ပျော်တဲ့သူ လောက မှာ မရှိလောက်ဘူးလို့တောင် သွေးနှာထင် ရောက် လိုက်သေးတယ် :-):-) ။ နောက်ဝါသနာ က အစ်ကိုက ရပ်ကွက်အစွံ မြစ်ဆိပ်ကမ်း တောစပ် တလျှောက် ငှက်ပစ်သွားဦးမယ် ဟေ့ ဆိုလည်း လိုက်ချင်ပြန်ရော ။ လူကလက်တောက်လောက် လုပ်ချင်တာ တွေက တုတ်နဲ့ ဓါး နဲ့ တကယ့်ပေသီးး ။ ဘယ်လောက်တောင် ဆိုးခဲ့လည်း ဆို တနေ့ အစ်ကိုက ဂျင် (ကြိုးနဲ့ ရစ်ပြီး ပစ်ပေါက်ကစား ရတဲ့ ကစားစရာ တခု ) ကို မန်ကျည်းကိုင်း တကိုင်းခုတ်ပြီး ဂျင် အသေးအကြီးဆိုဒ် စုံ လုပ်နေတာကို အားကျပြီး တစ်ခုလောက် လုပ်ပေးဖို့ သွားပူဆာတာ မရတာနဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဓါးတစ်ချောင်းယူပြီး သွားခုတ်လိုက်တာ လုလု ရဲ့ လက်ညိုးထိပ်လေး ပါသွားပါရောလား ။ နာလိုက်အရမ်းပဲ တော်သေးတာပေါ့ အရိုးတွေမထိသွားလို့ နို့ မို့ ဖြတ် လိုက်ရမယ် သာဆိုရင် မတွေးရဲ စရာပဲ ။ ခုနေများ တွေးကြည့်မိတာ ငယ်ငယ်တုန်းက တော်တော် စပ်စလူး ထခဲ့တာပဲလို့။
၄။ ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့ . . .
ှ အိမ်မှာ ဝက်တွေကြက်တွေ မွေးထားတာ တနေ့အစ်ကိုက ကြက်တစ်ကောင် သတ်ပြီး ချက်ထားတာ မမ က ဗိုလ်ကျပြီး ဟင်းအိုးကိုအရင်ဖွင့် ကြည့်ပြီး ပြောသေးတယ် ” အဲ့ ကြက်ခေါင်းက ငါ စားမှာနော် ” တဲ့ လုလု ကကြက်ခေါင်းတစ်ခါမှ မစား ဖူးဘူး မမက အဲ့လိုပြော ထားတော့ ဘယ်လိုအရသာလဲ ဆိုတာ သိချင်လာတယ် ဒါနဲ့ သူမရှိတဲ့ အချိန် မီးဖိုချောင်ထဲ အသာလေးသွား ဟင်းအိုးကိုအသံမမြည်အောင်ဖွင့်ခြံထဲကခူးလာတဲ့ ငှက်ပျော ရွက်ထဲ ကြက်ခေါင်းကိုထည့်
ပြီးတာနဲ့ မီးဖိုချောင်ပတ်ဝန်းကျင် ကို ဘယ်ကြည့် ညာကြည့် ဘယ်ပြန်ကြည့် ညာပြန်ကြည့် လမ်းရှင်း မှ ပြေး စနစ်နဲ့ အိမ်ထောင့်က မန်ကျည်းပင် နားကို သုတ်ခြေတင် ပြေးတော့တာပဲ မန်ကျည်းပင်နားရောက်တာတောင် မရပ်သေးဘူး
ကြက်ခေါင်းထုတ်ကို လက်က ကျစ်နေအောင် ဆုပ်ထားပြီး အပင်ပေါ်ကို ကုတ်ကပ်ပြီးတွယ်တက် လိုက်တာ (အဲ့ အပင်က တက်လို့ လွယ် ထိုင်လို့ ကောင်းတယ် လူမမြင်နိုင်ဘူး) အပင်ပေါ်ရောက်ပြီဆိုမှ အထုပ်ကို အသာဖြည် ကြက်ခေါင်းကို ကြည့်လိုက်တော့ အမောက်ကထောင် နှုတ်သီးကဖြတ်ထားလို့ နဲနဲ တို နေပြီ ကြည့်ရင်းနဲ့ စိတ်ထဲက တော့
မရိုးမရွဖြစ်လာပြီ ကြောက်တာလိုလို မသတီ တာလိုလို ပေါ့ “စားကြည့်မယ်ကွာ မမ တောင် သည်လောက် ထိကြိုက်တာ” ဆို့
မျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီး ခေါင်းကို ကိုက်ချ လိုက်တာ အထဲက ဦးနှောက်ဖြူဖြူပျော့စိစိတွေထွက် ကျလာ တော့ ဆက်ကိုက်ဖို့ မပြောနဲ့့ ပါးစပ် ထဲရှိတာအမြန်ထွေးထုတ် ပြီးအဲ့ကြက်ခေါင်းကို ဝေးနိုင်သမျှအဝေးဆုံး ထိ လွှင့်ပစ်လိုက်တော့တယ် ။ုသူများဦးထားတာကို စပ်စပ်စုစုလောဘ ကြီး ခဲ့ပြီး စားရဲတာလည်း မဟုတ်ဘဲ နဲ့ ။ ညနေ ထမင်းစားချိန်ရောက်မှ မမ က သူ့ ကြက်ခေါင်း ပျောက် လို့ စိတ်တွေဆိုး ဟိုလူ့ မေး ၊ဒီလူ့ မေးနဲ့ ကျန်တဲ့သူတွေတော့ မသိလို့ မသိဘူးပြော ၊ လုလု ကတော့ တအံ့တသြ အသံနဲ့ မသိဘူး ဘာဘူး ညာဘူး နဲ့ ရွှီး ရတာပေါ့ ။တကယ် ခု တွေးမိတော့လည်း ရယ်စရာ ဘဝရဲ့ တစိတ်တပိုင်း အဖြစ်လေး ပါပဲ ။
၅။ ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့ . . .
မောင်ငယ်လေးနဲ့ လုလု နဲ့ အတည့်အတူနေ မမြင် ချောင်းကြည့် ရတဲ့ နှစ်ယောက် ပေါ့ ။ အိမ်မှာနှစ်ယောက် တည်း ရှိတဲ့အချိန်ဆို စ ရင်း နောက်ရင်း ကနေ ထသတ် ကြပါလေ ရော ။ ငယ်တဲ့သူက ငယ်လို့ ဗိုလ်ကျချင်တယ် ၊ကြီးတဲ့သူ ကလည်းကြီးလို့ ဆရာလုပ်ချင်တယ် အဲ့နှစ်ယောက် တွေ့ လိုက်တိုင်း အေးချမ်းပြေလည်နေတယ် ဆိုတာ မရှိဘူး ပြဿနာဖြစ်တိုင်း အဒေါ်တွေက ရှင်းရ အဖွားက ရှင်းရနဲ့ ဘယ်သူမှအငြိမ်မနေ ရဘူး ။ကျောင်းမှာဆို မောင်လေးက သူငယ်တန်း လုလုက ဒုတိယတန်း ၊ တနေ့ကျောင်းကျန်းမာရေးအဖွဲ့ လာတော့ ကျောင်းသူ/သား အားလုံး ကိုယ်အလေးချိန် ချိန် ကြတော့ တစ်ကျောင်းလုံးမှာ မောင်ငယ်လေး က အနည်းဆုံး အပေါ့ဆုံး အသေးဆုံး ဖြစ်နေတယ် ။ တခါတလေ လုလု ရှိတဲ့ကျောင်းခန်းထဲလာပြီး တိုင်တယ် သူ့ ကို သူတို့ အတန်းခေါင်းဆောင် ဖက်တီး က ထုတယ် အနိုင်ကျင့် နေတယ် ဆိုပြီးးလုလုလည်း မောင်ငယ်လေး နောက်က လိုက်သွားး ဟိုဖက်တီး “နင် ငါ့မောင်လေး ကိုအနိုင်ကျင့် နေတယ်ဆို (သူ့ ခေါင်းကိုတချက်ခေါက် ) နောက်တခါ အနိုင်ကျင့်တယ် ကြားလို့ ကတော့ နင့်ခေါင်းကဆံပင် ကိုပြောင်အောင်နှုတ်ပစ်မယ် ဟင်း ဘာမှတ်နေလဲ “(ခါးထောက်ပြီး မျက်နှာတည်နဲ့ ပြော ) အဲလို သူများ နားမှာဆို ချစ်လိုက်ကြတာ ကာကွယ်ပေးရတာ အမော အိမ်ရောက်ပြီဟေ့ ဆိုရင် သူ နဲ့ ကိုယ် ရန်သူပဲ ။ တခြားမောင်နှမ တွေရော အဲ့လို ပဲလား မသိဘူး ။
မုန့် လင်မယား မြင်တိုင်း မမေ့ နိုင်တဲ့အဖြစ်လည်း ရှိသေးရဲ့။ လုလု ရဲ့ အဒေါ် အငယ် ဆုံးနဲ့ သူ့ သူငယ်ချင်း ယောက်ကလျှာ တစ်ယောက်နဲ့ မုန်ဖိုးလေး ရှာမယ်ဆိုပြီး အိမ်ရှေ့ မှာ တဲလေး ထိုးပြီး မုန့် လင်မယား ကြော်ရောင်း ကြတာ တစ်ညနေ လုလုနဲ့ မောင်လေး နဲ့ ဟိုပြော သည်ပြော နဲ့ စနောက်ရင်း ရန်ဖြစ် စကားများ နေကြရင်း ဒေါ်လေးငယ် တို့ အကြော်တဲ နားကိုရောက်လာကြတယ် ၊ ဒေါ်လေး တို့ လည်း အခုမှ စကြော် ခါစ ပဲရှိသေးတယ် ၊ မောင်လေး က မြင်းချီးခြောက် ခဲနဲ့ လုလု ကိုပစ် လိုက်တာ လုလုကိုကျော်ပြီး ဒေါ်လေး တို့ ရဲ့ မုန့် နှစ်ရည် အိုးထဲ တန်းတန်းမတ်မတ် ကျပါ လေရော လား ။ အဲ့ ချိန်မှာ ဒေါ်လေးကို လာလာ ကြောင် နေတဲ့ အရက်သမားက အချိန်မှန် ပုံမှန်ရောက်လာတယ် ရေချိန်လည်းကိုက်နေ ပုံရတယ် ။ လုလုတို့ မောင်နှမ ဒေါ်လေးရဲ့ ကြိမ်းမောင်းဆူဆဲ ဒဏ်ကနေ ခဏ အနားရတယ် ။ ဒေါ်လေးတို့ မှာ ဟိုအမူးသမား ကိုလည်း ဈေးရောင်းချင် ၊လုလုတို့ ကိုလည်း ရိုက်ချင် ၊ မုန့် နှစ်ရည် အိုးမှာလည်း မြင်းချီးခြောက် အမြန် ဆယ် ထုတ် လိုက်ပေမယ် သဲ တရှပ်ရှပ်နဲ့ ကျန်ခဲ့တော့ ဒေါသ တွေအလိပ် လိုက် ဘယ်လို ထွက်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေမှာပေါ့ ။ ဟိုအမူးသမားလည်း ကျန်တဲ့မုန့် လင်မယား အကုန်ဝယ်မယ် အိုးထဲက ဟာတွေပါ ကြော်ပေးဆိုတာနဲ့ ဒေါ်လေးတို့ နှစ်ယောက် မုန့် နှစ်ရည်အကြောင်း ဖွင့် ပြောရခက် ၊ငြင်းရခက် နဲ့ နောက်ဆုံး ဝယ်နေကြဖောက်သည်တော့ အပျက်မခံနိုင်လို့ နဲ့ တူတယ် မုန့် နှစ်ရည် ကိုအပေါ်ယံ အသာ ခပ်ပြီးရတဲ့အထိ ကြော်ပေး လိုက်တယ် လို့ ပြောသံကြားလိုက်ပါတယ် ။ ဟိုလူ စားတာကို မြင်ယောင်ကြည့်ပြီး စိတ်ထဲက အော်ကလီ ဆန် လာတယ် ။
၆။ ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့. . .
လုလု မှာ သူနာပြုဆရာမ အဒေါ်တစ်ယောက်လည်း ရှိသေးတယ် ။ သူကအရမ်း စည်းစနစ် ကြီးတယ် ။ သူ့ ကိုဆို လုလုတို့ မောင်နှမတွေ အားလုံးက ချစ်ကြောက် ရိုသေ ရတယ် ။ ဘယ်တော့မှမရိုက်ဘူး တခါတလေ ဗိုက်ခေါက်ဆွဲ လိမ်တတ် တာတော့ရှိတယ် ။ လုလုတို့ မောင်နှမတွေကို မှတ်ဉာဏ်ကောင်းအောင်ဆို ပြီး ရွှေဖရုံ သီးတွေ ကို ဟင်းလိုတမျိုး ၊ဆန်ပြုတ် လိုတဖုံ ၊ ကန်စွန်းဥ ပြုတ်သလိုပြုတ်ပြီး ပဲဆီ စိမ်းနဲ့ တို့ စားခိုင်းတာက တနည်း အဒေါ် ကိုကြောက်လို့ သာစား ရတာ မမြင်ချင် မကြားချင် တော့အောင်ကိုမုန်းနေပြီ ။ သူ ကဉာဏ် ကောင်းအောင် ကျွေးတာ လုလု မှာ ဉာဏ်မကောင်းချင်လည်း နေပါစေတော့ အနံ့ တောင်မခံ ချင်တော့ အခုချိန် ထိပါပဲ ။
၇။ ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့ . .
လူကြီးတွေရဲ့ စကားကိုချည်း နားထောင် ၊ အာခံရင် အရိုက်ခံ နေရတော့ မြန်မြန်လူကြီးဖြစ်ရင် ကောင်းမယ် လို့ ပဲတွေးနေ မိတယ် ။ နေရာတကာချုပ်ခြယ် တယ် ဆိုပြီး စိတ်ညစ် ခဲ့ရတာတွေ အခုချိန်ပြန် လိုချင်လည်း ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တော့ ဘူး ။ မနက်အိပ်ယာထပြီဆိုတာနဲ့ စားချင်တာစား ၊ ဆော့ချင်သလိုဆော့ ၊ ရွာရိုးကိုးပေါက်မက လျှောက်သွား ပြီး
သူများခြံထဲက သရက်သီးတွေကို ခဲ နဲ့ လှမ်းထု ၊ မန်ဂို သီး မြည့်နေတာမြင်ရင် တုတ်နဲ့ လှမ်းရိုက် ၊ လှည်းလမ်းဘေး က ဇီးသီးပင်လည်း မရ ရအောင် ခြွေချ စားရတာမရတာ အဓိက မဟုတ်ဘဲ စိတ်ချမ်းသာသလို လုပ်နေရတာ ကိုပျော်တာ ။တနေ ကုန် မနားတမ်း စပ်စလူးထပြီး ဆော့ခဲ့တာတွေလည်း ည အိပ်ယာ ဝင်ချိန်မှာ အပူအပင် ကင်းမဲ့စွာ အိပ်ပျော် နိုင် ခဲ့ တယ် ။ အဲ့လို ဘဝ ကိုအခုချိန်မှာ ရွှေတွေ ငွေတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ပုံအောပေး ပေး ပြန်မရနိုင် တော့ ဘူး ။ ကလေးဘဝတုန်းကလူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်အမြန် ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒ ခုချိန်မှာ ပြည့်ခဲ့ပေမယ့် ကလေးတစ်ယောက်ပြန်ဖြစ် ချင်တဲ့
ဆန္ဒတော့ ဘယ်တော့မှပြည့်မှာမဟုတ်တော့ ။ အေးချမ်းသာရာ မယ့်ဘဝကို ရှာဖွေရင်း အသက်တွေပဲပေးဆပ် ကြရမယ် ။
၈။ ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့ . . .
လုလု လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ် ။
အခုတော့ ပူပင် သောက မရှိတဲ့ ကလေး တစ်ယောက်ပြန်ဖြစ်ချင်တယ် ။
လုလု (တောင်ကြီး )
ရွယ်တူတန်းတူ မောင်နှမ မရှိတော့ တစ်ကိုယ်တော် ဆော့ခဲ့ရတာ
လုလု တို့ မောင်နှမ များတော့ ရန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်နဲ့ 
စာအုပ်ဖတ် ဖို့ ကို စိတ်ကမရောက်တော့ဘူးး
ဒါက တညားရဲ့ ငယ်ဘွ ကညင်းဂျောထတုန်းကပေါ့။
ကလေး တုန်းက လူတိုင်း ကညင်းကျော ထကြတာပဲနော်
ကျနော်လည်း ဘာထူးလဲ ငယ်ငယ်က ကြီးချင်တယ်
ငယ် လို့ တော့မရတော့ဘူး
ပိုကြီးဖို့ ပဲ ရှိ မယ်
.ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ စားလို့ရသမျှအသီးအနှံ ဆိုဘယ်သူပိုင်ပိုင် ရအောင်ကြံစည်စားကြတာလည်းပျော်စရာ
“ကလေးဘဝတုန်းကလူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်အမြန် ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒ ခုချိန်မှာ ပြည့်ခဲ့ပေမယ့် ကလေးတစ်ယောက်ပြန်ဖြစ် ချင်တဲ့
ဆန္ဒတော့ ဘယ်တော့မှပြည့်မှာမဟုတ်တော့ ”
♫♪♫ငယ်စဉ်က ကလေးတို့ဘ၀ဟာ♫♪♫ ပျော်ပါးဖို့ရာ လွယ်ပါတယ်♫♪♫…… :))
သူများခြံထဲက ဘာသီးပဲဖြစ်ဖြစ် မရရ အောင် ခူး
ခဲနဲ့ ထု အိမ်ရှင်အော် မှ လိမ့်နေအောင်ပြေးးး
ချစ်စရာ လုလုလေးနေမှာ …
ခု အလွဲလေးတွေရော ရေးအူးးး
ခု တော့ စပ်စလူးအကြီးစား ပေါ့
အသက်ကြီးလာလေ လွဲ လို့ ကောင်းလေ ပါပဲ
တောင်ကြီးရောက်ရင် လာတွေ့ ပါ့မယ်
ငယ်ငယ် တုန်းက လို စပ်စလူးပဲနော့ ဟီးဟီးး
လုလုတွေက စိတ်ကြီးတတ်တယ်ခင်ဗျ… အိမ်ကအမေလဲ လုလု…ဖြူဖွေးလဲလုလုပဲ …. အဲ့ဒုတိယသမီးတွေက ချောတတ်တယ်ဗျ ….
ချော တတ်တယ် ဆိုလို့ မုန့် ကျွေးချင်တာလဲ အမှန် ပဲ
ခဏ ခဏ ရောက်ဘူးတယ်
အဒေါ်က သစ်ထုတ်ရေးက ၊ သူ့အိမ်က မြစ်ဆိပ်နဲ့ ကားလမ်းပဲခြားတာ ၊
မြစ်ကြီးနားမှာ အကြိုက်ဆုံးက ရေစိမ်ခေါက်ဆွဲ ၊ ဒီသင်္ကြန်တော့ ရွှေကူ ဗန်းမော် ရောက်မယ် ၊
မြစ်ကြီးနားမှာ အကြိုက်ဆုံးက မြစ်ဆိပ်ထဲ ရေသွားကူးရတာပဲ
ဗန်မော် ရွှေကူ ရောက်ဖူးတယ်
ပျော်စရာကြီးနော်…. နယ်မှာနေရတဲ့ ကလေးဘဝများ သိပ်ပျော်စရာကောင်းတာပဲ…
ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်လာလေ စိတ်ကျဉ်းကြပ်ရလေပဲ
ကလေးတွေလည်း အရင်ကလို လွတ်လပ် မှုတွေမရှိတော့ဘူး
လွမ်း​အောင်​ဖန်​​နေတာလား ဟင်​ ! မြစ်​ကြီးနားမှာ ခွစ္စ မတ်​​နေလားမသိ စားခဲ့ရတဲ့ ကြ်​သားဆန်​ပြုတ်​ ။ အရည်​မပါ ။ ငှက်​​ပျောဖက်​နဲ့ ထည့်​​ကျွေးတာ လွမ်းမိတယ်​ ။
ကချင်တွေက မုန့် တွေသိပ်မလုပ်စား တတ်ဘူးး
အများအားဖြင့် ရှမ်း အစားအစာ ကို စားကြတာ
ကြူနူးစရာ ငယ်ဘ၀လေးတွေအကြောင်းကို ဝေမျှပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
မလုရဲ့ ကောင်းမှုကြောင့် ကျွန်တော်လဲ စိတ်ကူးယဉ်ရွက်လှေကြီးနဲ့ အတိတ်ကမ္ဘာကို ပြန်ရောက်သွားမိလေရဲ့။
ဟုတ် ခုလို ဝင်ရောက်အားပေးသွားတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လူတိုင်းမှာတော့ ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ငယ်ဘဝတွေကို ကိုယ်စီပိုင်ဆိုင်ထားကြတာ ပါ
..ကျီးလျင်မှီ ငဲလျင်ချီဒဲ့.. ကေအိုင်အေ လုမ ဒလောက် ငယ်ခြင်ယဉ် ကိုယ့်ထပ်တနှစ်နီးပါး ကျီးဒဲ ကကြောင့်ကို မှီလိုက်ပါရား…။ လူလစ်ယဉ် teaဇို့..
ကျောင်းဝန်းထဲက မန်ကျည်းပင်ပေါ်တက် ဂွေးတောက်နွယ်တွေနဲ့ လွဲဆော့ ပျော်စရာကောင်းချက်ကွယ်…
ငယ်ငယ်တုန်းက အကြောင်းတွေစဉ်းစားမိတိုင်း ……